सिटौला, गगन र केसीको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा ! | Diyopost
सिटौला, गगन र केसीको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा !
काठमाडौं, २६ कात्तिक । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र गगनथापागत १३ औं महाधिवेशनमापदाधिकारीकालागिउम्मेदवार बनेकाथिए । सिटौला सभापतिमाउम्मेदवार बन्दै दोस्रो चरणमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न पुगेकाथिए । केसी महामन्त्रीमा डा. शशांककोइरालासँग पराजितभएकाथिए । यतालोकप्रिययुवा नेतागगनथापापनिमहामन्त्रीमाशशांक र केसीभन्दा पछि पर्दै तेस्रो स्थानमापुगेकाथिए । यीतीनै जना नेतालाई सभापतिमानिर्वाचित भएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यमामनोनित गरेकाथिए ।
तर, यीतीनैजना नेताहरुलाई राजीनामादिनदबाबदिंदै कांग्रेसका एक जिम्मेवार नेताले फेसबुकमापोस्ट गरेका छन् । कांग्रेस नेताशोभाकर पराजुलीले लेखेको फेसबुक पोस्टमा भनिएको छ, सानो जिज्ञासा ः शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट महामन्त्रीकाउम्मेदवार अर्जुननरसिंह के सी,देउवालाई सभापतिबन्न सघाउने कृष्ण सिटौला,गगनथापाहरुले अहिले देउवाको विरोध गर्दा उहाँद्वारा मनोनित केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजिनामादिनु पर्छ कि पर्दैन?’
जिम्मेवार नेताले कांग्रेसकायीप्रभावशाली नेताको राजीनामामाग गरेपछि कांग्रेस वृत्तमा खैलाबैलामच्चिएको छ । पराजुलीले यो पोस्ट नेपालीकांग्रेससँग शुभेच्छा राख्नेहरुको पेज नेपालीकांग्रेसमापोस्ट गरेकाहुन् ।
किन विरोध गरे पराजुलीले ?
१३ औं महाधिवेशनमा र त्यसपछि सिटौला, केसी र थापातीनै जना नेताहरु देउवापक्षतिरै थिए । तर, सभापतिको कार्यशैलीप्रभावकारी नभएको भन्दै यिनीहरु पछिल्लो समय पौडेल खेमातिर लागेका छन् । देउवाले मनोनित गरेर केन्द्रीय सदस्यबनाउने तर, उनैको विरोधमाउनीहरु उत्रिएपछि पराजुलीले राजीनामादिएर नैतिकता देखाउनआग्रह गरेकाहुन् ।